ကရင်စည်သွပ် စွံပီ law | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကရင်စည်သွပ် စွံပီ law
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 18, 2013 in Copy/Paste, Gossip, Rumor | 25 comments
သစ်ထူးလွင်ဆိုက်မှာ ဆိတ်ဝင်စားဖွယ် သဒင်းတဘုတ် တွေ့လို့ ရွာသူအများ အချိန်မှီသိရှိနိုင်ဖို့ စေတနှာရှေ့ထား ဖင်ပြပါသည်။ ရွာသားကိုရင်စည်သွပ် ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းချက် စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်ပါဂျောင်း…
ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန် ၅ ရက် နေ့လယ် ၂ နာရီက တေးသံရှင် နေနေရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီး ဆူးစူး သူ DVD ကာရာအိုကေ အခွေ စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဆူးစူး သူ အခွေကို ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိပေးသွား မယ်လို့လည်းသိရပါ တယ်။ အခွေအတွက်မျှော်မှန်းထား တာလေးတွေ ရှိဦးမလား ဆိုတော့ ဒါကတော့ ကိုယ်ကြိုးစား ထားတာ လေးကို ပြန်တော့ အရာထင်ချင် တာပေါ့။ ကောင်းတဲ့ ရလဒ်လေးတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီအခွေ ထဲမှာ သီချင်းအကုန်လုံး နီးပါးကြိုက် တယ်။ VCD ရိုက် တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲကတော့ မရှိပါဘူး။ အမှတ်တရတွေကတော့ အမျိုးစုံပါပဲ။ သီချင်းတိုင်းကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစား ထားပါတယ်။ တစ်ခွေလုံးကြည့်ပြီး သွားရင်တော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဘာလိုတယ်ဆိုတာ ဝေဖန်လို့ရပါ တယ်။ အခု အချိန်မှာ အရမ်း ပျော် ပါတယ်။ မကြာခင် အိမ်ထောင် ပြုတော့ မှာလား ဆိုတော့ “တချို့တွေ ပြောကြတဲ့ ဒီနှစ်ထဲမှာ နေနေအိမ် ထောင်ပြုမယ် ဆိုတာက ဟုတ်ပါ တယ်။
ဒီနှစ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုဖြစ် ဖို့များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ နေနေတို့ ရှေ့နှစ်မှာ သူသင်္ဘောတစ် ခေါက်ပြီးတာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အစီ အစဉ်ချထား တာတွေက အစ်မတို့ နှစ်ယောက်က ဘာသာမတူဘူး လေ။ အစ်မက ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ သူက ဗုဒ္ဓဘာသာလေ။ နေနေတို့က ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာလို တစ်ခါဆောင်မယ်။ မင်္ဂလာနှစ်ခါ ဆောင်မယ်လို့တော့ စီစဉ် ထားတယ်။ ဘာသာမတူဘူးဆို တော့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ တော့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ နေနေကို အရမ်း နားလည်ပေးတယ်။ နေနေ လည်း သူ့အပေါ်နားလည်တယ်။ နှစ် ယောက်စလုံး ကတော့ အဆင် ပြေ ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစား သွားမှာပါ” လို့ ဘာသာ မတူတဲ့ကိစ္စ ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ ပတ် သက်ပြီးဖြေခဲ့ ပါတယ်။ By 8 Days
ကရင်စည်သွပ်… ဂလို ဒိုင်မလျှိုနဲ့လေ…
ဆိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းကြီးကို မြန်မြန်ရှင်းပါဗျ…
ဟိဟိ… တော်ကြာ သဘောင်္ပေါ်က ခုန်ချနေပါဦးမယ်ကွယ်..ဟိုရက်ကလည်း ပါးကို မီးရှို့လို့ရှို့.. အသာလုပ်ကြပါကွယ်…
သီတင်းတွေ ကြားခဲ့တယ်။ စည် လိမ်ဖို့ စိတ်မကူးနဲ့။
ဟင်း သတင်းကြီးကလဲ.. ကျုပ်တော့မထင်ပေါင်..
ဟို ကတွတ်ပီ ကာတွန်းထဲကလို ရွာထဲ အပျိုမ တစ်ယောက် ပျောက်နေရင် လူပျိုကြီးစောတင်မောင် က အိမ်က ဖျာလိပ်ထဲ ၀င်ပုံးနေသလို…
ကရင်စည်သူ.အဖြစ်က အဲလို အဲလို………. မထင်…. ခွိခွိခွိ
အောင်ကြူးကြီး.. မရှင်းသေးဘူး.. ဟီးး ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်လေးတွေရှိလာမလဲ..
သူလေးက အသံလေးကကောင်းတော့… တော်ကြာ
ကနားစီးမဒွေ.. အံ့စာတုံးတွေ မနာရိုပီး…. လေဆိပ်က ပိတ်စောင့်နေမှဖြင့်…
ဗယာကြော်ပါ.ကစည်သွပ်…ဒါဂျောင့် ဟိုနေ့က ဒင်း သဘောင်္ပေါ်မှာ ဘာသာပြောင်းလိုက်တာကိုး…အထင်ခံရနည်းသလား..ဘာမှဖြေရှင်းနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ..
ကရင်စည်သွပ် စွံပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားလိုက်တာနဲ့
ရွာသူားတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်နဲ့ ဧည့်ခံမယ်လို့ ပြောထားကို သတိရသွားတယ်။ :harr:
အဲ့လူက ဇနဲ့ …ခွိခွိ
တကယ်တော့ အူးကြောင်ဂျီးက သူ့သမီးလေးကို ထိုးကျွေးပီး..
ကိုရင့်ကို ရေငါးလေးနဲ့ ကွဲအောင်လုပ်နေတာပါ…
နေဆယ်နေထွက်လည်း ရေထဲကလူဆိုတော့ ငါးပဲကြိုက်တယ်..
ငါးပဲချားတယ်.. အရိုးတောင် ၀ါးပစ်ဒါ..
ပြန်ရက်နီးပီဆို ရောဂါတွေကပြန်ထလာပီ.. သြော်… ဒုခ..ဒုခ
♫ ♪ ♫ အခြေအနေမတူရင် မချစ်ရဘူးလို့ .. ပညတ်ချက်တွေရှိထားလား … အချစ်ဆိုတာပြောရခက်တာမို့ .. တို့ချစ်မိတာအပြစ်ရှိလား ♫ ♪ ♫ … ခွိခွိ
ပျော့စ် ဇမ်းဘာ ကျုပ်ကို
ဘင်လာဂီ ဆိုပြီး ဇီးညလေးနဲက မပေါင်းရအောင် ကြံဆောင်နေသူဒွေကို…
၉-၆-၉ ကို အဟွာ ပတ်လည် တက်တူးထိုးပြီးလာခဲ့ပါ့မယ်ကွီ
လမ်းထိပ်မှာ ဘယာကြော်ရောင်းတဲ့ ဟိန္ဒူကုလားမလေးရှိတယ်
ထင်သား …နန်းမီမီ ဟိုဒင်း ဆိုတာ ဒင်းဂလေးပါလို့…
ခုဝန်ခံဘီ တွေ့ဒယ်ဟုတ်.. အကြော်ရောင်းတာတဲ့ ..
လက်စသပ်တော့ ဗယာကြော်ကိုး …
အွမ် .. အဲ့ကုလားမလေးနာမည်က နန်းမပါဘူးရယ်
ညနေကျရင် တကူးတက ဒါ့ပုံသွားရိုက်ပေးမယ်နော်
ဟောဒါလေးကတော့ ကျော် နောက်ရေးမယ့်ပိုစ့်ရဲ့ အဟွာလေးဖြစ်ပါတယ်ခီညာ
ဟိုလူ ကနားစီးမက လာပြောတယ်.. မိုးစက်က တွမ်တီးဝမ်းတဲ့..
ကိုရင်က တွမ်တီဖိုးဆိုတော့.. ဝေးပီထင်ပါ့နော်…။
တွမ်းတီးချင်းတူနေတာပဲ မိုးလေးရယ်… ကိုရင်တို့..
ရွှာထဲက အကျန် အဲ့ ဟုတ်ပေါင် ကျန်တဲ့ လူပြိုသိုးးးရီးးးတွေကို သသိုးးးတားးပန်းရံ အဖြစ့့်အဟီ
ဂယ်ဘဲစွမ်တယ်မှတ်တာ။ အထုတော့ တင်းဘောတားအပေါင်းအားလုံးအကြုံးဝင်တွားဒလိုဘဲ။ တူလိုလို ငါလိုလိုပေါ့။
” ဂယ်ဘဲစွမ်တယ်မှတ်တာ။ အထုတော့
တင်းဘောတားအပေါင်းအားလုံးအကြုံးဝင်တွားဒလိုဘဲ။ တူလိုလို ငါလိုလိုပေါ့ ”
အဟိ ၊ အဲဒီ တူလိုလို ငါလိုလို ထဲမှာ ၊
အဘ ရယ် ၊ TNA ရဲ့ —- ရယ် ၊ ကော ပါလို့ ရလားဟင် ။
ကရင်စီတစ်ယောက် အခုစိုလူအထင်ကြီးအောင် ဘောထဲကမထွက်နေလောက်ပီ… (ဘော = အသက်ကယ်ဘော)
နေနေလဲ အိမ်ထောင်ကျပြီး သင်္ဘောသားကိုကို နဲ့ ခွဲနေရတဲ့ အချိန်တွေ များနေမှာမို့
အချစ် အလွမ်း သီချင်းတွေ ပိုလို့ ပီပီပြင်ပြင် နားထောင်ရတော့မှာပဲ
ကရင်စည် ရုပ်ရည်နဲ့ဆို အဆိုတော်ထက် ဟို ရွယ်တူ သရုပ်ဆောင်လေး
ရွှေမှုန်ရတီ နဲ့ က ပိုဖြစ်သင့်တာ
တို့ ကိုရင် စွံပဟ
ဒါတောင် မစွံရင်တော့ မျက်စိ စွံဖို့ပဲ ရှိတော့တယ် ဟီဟိ
အော်..ဟော်.. အိုက်ဒါဆို ကိုရင်စည်သူကိုအပြင်မှာမြင်ဖူးတယ်.. ခပ်ပုပု ခပ်သေးသေး အသက်လည်းသိပ်မကြီးသေးဘူးပဲ